Yakakodzera kuita kuyerwa kwekupokana kwekudzivirira (IR), kunyura mwero (DAR), polarization index (PI), kuvuza ikozvino (Ix) uye kunyura capacitance (Cx) yemarudzi ese emhando yepamusoro yemagetsi, kusanganisira switchgear, transformers, reactor, capacitor, motors, jenareta uye tambo, nezvimwe.
Ichi chishandiso chinogona kuyedza kudzivirira kudzivirira (senge transformer, switchgear, lead, mota) yemamodule akasiyana mune imwe system, insulate uye kugadzirisa kutadza zvikamu.
GD3127 Series Yakakwira Voltage Insulation Resistance Tester
GD3127 Series Insulation Resistance Tester inoshandiswa zvakanyanya mukuchengetedza midziyo yemagetsi mu transformer substation, power plant, nezvimwe.
GDHX-9500 Phase Detector inonyanya kushandiswa mumitsara yemagetsi emagetsi, chikamu uye chikamu chinoteedzana calibration mune substation, ine mabasa makuru anosanganisira kuongorora magetsi, chikamu calibration uye chikamu kutevedzana kuyerwa.
GDHX-9700 Phase Detector inonyanya kushandiswa mumagetsi emagetsi tambo, nhanho, uye nhanho kutevedzana calibration mune substation, ine mabasa makuru anosanganisira kuongorora magetsi, chikamu calibration uye chikamu kutevedzana kuyerwa.
GDCR1000C, GDCR1000D isiri-contact phase tester ndiyo budiriro huru mune yechinyakare chikamu chekutevedzana nzira yekuona.
GD2000D digitaalinen insulation resistance tester inogadzirwa nekambani yedu inoshandisa yakamisikidzwa indasitiri imwe chip chaiyo-nguva inoshanda sisitimu.Iyo yedhijitari analog pointer uye yedhijitari yemunda kodhi kodhi yakanyatsobatanidzwa.
GDDT-10U Earth Continuity Resistance Tester ndeye otomatiki uye inotakurika bvunzo michina.Inoshandiswa pachiyero chebreakover resistance value pakati penyika yekubatanidza tambo dze substation magetsi emidziyo.
MuDc system, kune zvikanganiso zvakawanda zvepasi zvinosanganisira indirect earth fault, non-metal earth fault, loop earth fault, positive and negative earthing fault, positive and negative balance earth fault, multi-point earth fault.
Inoshandiswa zvakanyanya mumagetsi emagetsi, nharembozha, meteorology, munda wemafuta, kuvaka, kudzivirira mheni, zvigadzirwa zvemagetsi zvemaindasitiri uye kumwe kuyerwa kwepasi pasi.
GDWR-5A Earth Resistance Tester yeGround Grid
GDWR-5A Earth Resistance Tester ndeye yakakwirira-chaiyo bvunzo chiridzwa chinoshandiswa munzvimbo dzakasiyana siyana senge zviteshi zvekuyedza kumisa pasi uye zvinoenderana nemaparamita.Chiridzwa chine hunhu hwevhoriyamu diki, huremu huremu, kutakura kuri nyore, kuita kwakasimba kwe-anti-interference performance uye nepamusoro-soro.
Online Monitoring System Yekutenderera Ikozvino paCable Sheath GDCO-301
Matambo ari pamusoro pe35kV anonyanya kunyanya tambo dze-single-core dzine sheath yesimbi.Sezvo simbi sheath yeimwe-musimboti tambo yakasungirirwa neiyo magineti mutsara inogadzirwa neiyo AC ikozvino mupakati waya, iyo migumo miviri yeimwe-musimboti tambo ine yakakwira induced voltage.